ဒီနှစ်ရဲ့ ဒုတိယမြောက်အဖြစ် ဒီနေ့ နှင်းကျတယ်။ ဒီတစ်ခါကတော့ Heavy ပေ့ါ။ မနက်ကျောင်းသွားချိန်မှာလည်း ကျနေတယ်။ ဦးထုပ်ယူသွားရသေးတယ်။ မဟုတ်ရင် ခေါင်းဖြူကြီးဖြစ်သွားမှာ သေချာတယ်။ နေရာတိုင်း ဖြူဖွေးနေတာပဲ။ ကျောင်းရောက်တဲ့ အထိပဲ။ ဒီကလူတွေ နှင်းကို ဘာကြောင့် မမြင်ကတ်လဲဆိုတာ ဒီနေ့မှ လက်တွေ့သိတော့တယ်။ သွားရလာရတာမကောင်းဘူး။ နှင်းပေါ်လမ်းလျောက်ရတာ ဇွက်ဇွက်နဲ့ ဟမ်မိုနီလိုက်နေသလား အောက်မေ့ရတယ်။ ဒါပေမဲ့ နှင်းတွေ အရည်ပျော်သွားတဲ့ အခါမှာတော့ စိတ်ပျက်စရာကောင်းအောင် အမဲရောင်ရွှံ့တွေဖြစ်သွားတယ်။ အဲဒါတော်တော်ဆိုးတယ်။ အရမ်းကျရင် လေယာဉ်တွေလည်း ဒုက္ခတွေ့တော့တာပဲ။ ဆင်းမရ ပြုမရနဲ့ ... မုန်းလည်း မုန်းလောက်ပါတယ် :) ကျောင်းကနေပြန်လာတော့လည်း လမ်းမှာ တော်တော်အေးတယ်။ လက်တွေတောင်ကျင်လာတယ်။ ဒီရက်ပိုင်းအတွင်း ဒီလိုရာသီဥတုကြီးနဲ့ပဲ ဆက်သွားနေဦးမယ် ထင်တာပဲ။ နှင်းကျတဲ့ပုံတွေ ထပ်ပြီးရိုက်ထားတယ်ဗျာ။ နှင်းချစ်သူများ ခံစားကြည့်ပါဦး။
jittoo12 11:08 pm
yeah it's nice to see those snow covered houses scene only from inside of the building. Once you get out to go somewhere, you'llbannoyed by those snows. Take care bro. Temperature's hitting minus degree these days.
MYO HAN HTUN 1:21 am
ဘယ်လင်တိုင်း ဒေး မှာ ..
ဆောင်းရယ် နှင်းရယ် ကိုယ့်ချစ်သူရယ် ဆိုတဲ့ တွံတေးသိန်းတန်ရဲ့ သီချင်းလေးဆိုပြီး .. ကွေးလိုက်ပါလား ငါ့ညီ CMS ရေ .. ဟီး ဟီး ..
CMS 1:47 am
Thz: sis U too :)
ကျွန်တော့်အတွက် ဘယ်လင်တိုင်းက Black Time ဖြစ်နေပြီ။ ဘယ်နှယ့်မှ မဘယ့်နှယ့်နိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ် ကိုကြီးတိုးရေ ... လုပ်အုံး :P